आजको राशिफल : मिति २०७५ साल साउन २७ गते प्रतिपदा तिथि आईतबार, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
आजको राशिफल : मिति २०७५ साल साउन २७ गते प्रतिपदा तिथि आईतबार
मेष : तपाईको मन चंचल हुने छ । कुनै निर्णय लिनुपूर्व अरुको सहायता लिँदा राम्रो हुने छ । काममा सफलताको योग छ । एकाग्र र सर्तक भएर काम गर्दा मनमा सकरात्मक चेतना आउने छ । पेटको समस्या हुन सक्ने देखिन्छ । विना कुनै कारण कसै सँग झगडा अथवा मन मुटाव हुन सक्ने सम्भावना छ त्यसैले ख्याल गर्नुहोला।
बृष : स्वभावमा परिवर्तन भएर तपाँईलाई खुशीयाली बनाउने छ । आजको दिन समयको भने चाप रहने छ । काममा बढि समय व्यस्त रहने देखिन्छ । पारिवारीक सदस्यवाट सहयोग तथा व्यतmीत्व प्रभावशाली हुनुले समय राम्रो रहेको छ ।
मिथुन : कुनै काम गर्न हतार नगर्नुहोला । यो दिन तपाईँको काममा ढिलाई हुन सक्छ कुनै बाधा भए सावधानी पूर्वक समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने छ । केही दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना छ । मनमा अशान्ति रहने छ । कसै सँग मतभेद हुनसक्छ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। मनमा नकरात्मक विचारले अलि नराम्रो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ । तर, सकारात्मक चिन्तन तपाईले राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
कर्कट : साथी भाइ सँगको भेटघाटले तपाईँलाई सकारात्मक उर्जा दिनेछ । भेटघाटमा बनाइएका योजनाले दीर्घकालिक हित गर्नेछ । अन्य कसैका लाग तपाई केही लाभा हुने काम गर्नुहुनेछ । कुनै नयाँ काम गर्नको लागि उर्जा प्राप्त हुने छ । मनमा रहेका विचारहरू बदलिरहँदा कतिपय विषयवस्तुप्रति भ्रम सिर्जना हुन सक्ने छ । व्यापार तथा रोजगारीका लागी जतिसक्दो सहायता तपाईंले पाउनु हुने छ । तपाई भन्दा उच्च ओहोदाका पनि तपाईँलाई सघाउनेछन् ।
सिंह : शारीरिक रूपले अलि कमजोर भएको तपाईंले महसुस गर्नुहुने छ । अल्छीपना देखिने छ । आफ्नै वरपरको , नजिकको साथीबाट आर्थिक लेनदेनमा धोखा हुने छ । अपच तथा अन्य विविध कारणले शारीरिक समस्या हुने छ । आजको दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा भने सफलता हासिल हुने योग छ । घरपरिवार तथा जीवनसाथीबाट पनि असहयोग हुन सक्छ ।
कन्या : नयाँ सम्बन्ध स्थापनामा तपाई व्यस्त रहनुहुने छ । कसैलाई सहयोग गर्न पनि तपाई सक्रिय रहनुहुने छ । तपाईँको ध्यान आर्थिक उपलब्धि तिर केन्द्रीत हुने छ । शान्त र शालीन भएर काम गर्नुहुने छ । जीवनसाथीबाट अथाह सहयोग प्राप्त गर्नुहुने छ । घरपरिवारको सहयोग पनि रहनेछ । तर परिवारकै केही सदस्यको स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्ने ठानिएको छ । यो दिनको कुराले तपाइको आत्म विश्वास भने बढाउने छ ।
तुला : अनावश्यक खर्च हुने सम्भावना छ । कामकै सिलसिलामा धेरै समय खर्च हुने छ । बालबच्चाको खर्च पनि बढि हुने छ । बालबच्चाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिन जरुरी छ । आज कुनै चोटपटक हुन सक्ने सम्भावना छ त्यसैले ख्याल गर्नुहोला । अचानक हुने कुरा प्रति तपाई चिन्तित देखिनुहुने छ ।
वृश्चिक : आजको दिन स्वास्थ्यको समस्याले तपाईँलाई सताउने छ । परीक्षाको नतिजा नराम्रो आउन सक्छ । केही काम गर्नु पूर्व सल्लाह लिनु जरुरी छ । जीवनसाथी बाट राम्रो सहयोग पाउनु हुने छ । कँही कतै घुम्न जाने कुरा सँग बाट तपाईको मन प्रसन्न हुन सक्छ । समाजमा मानसम्मान हुने छ । इष्टमित्र साथ सहयोगमा समय व्यतीत हुने छ । आजको दिनमा रातो रगंको प्रयोग नगर्दा राम्रो ।
धनु : आजको दिन मिश्रित फलदायी छ । रिस अथवा आवेग प्रति संयम भएर समाधान खोज्नु पर्नेछ । आज कतै यात्रामा नजाँदा राम्रो । नकरात्मक सोचाइ बाट टाढा रहनूस् । सवारी चलाउँदा सावधानी अपनाउनुस् । फजुल खर्च हुन सक्छ । पारिवारीक सम्बन्ध राम्रो राख्नलाई वादविवाद नगर्नुस् ।कार्यालय तिर हामिकहरुले अलि नमिठो बोल्न सक्छन् । यसमा ख्याल गर्नुहोला ।
मकर : फजुल खर्च नगर्नुहोला । मनमा सकारात्मक विचार भए अवरुद्घ रहेको काम पनि सम्पन्न हुने छ । कोही निकटतम व्यतmीहरुको बारे नराम्रो समाचार तपाईंले सुन्न सक्नु हुने छ । हरेक काम सोचर सम्झेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कुंभ : आजको दिन मध्यम फलदायी रहने योग छ । अधुरो काम पुरा हुने छ । तपाईँको मेहनतको फल भाग्य हुने छ । इष्टमित्र तथा घर परिवारजनबाट सहयोग पाइने छ । घर परिवारमा कुनै शुभ मंलगको कायर्कक्रम हुन सक्छ । जीनवसाथी सँग विचारमा मतभेद हुनसक्छ । तपाईँको जीनवसाथीको स्वाथ्यलाई लिएर तपाई चिन्तित हुनसक्नुहुन्छ ।
मीन : आज कुनै नयाँ काम सुरु गर्न सक्नुहुन्छ । राम्रो योग छ । आज धन प्राप्तिको योग छ । नकरात्मक विचारबाट टाढाँ रहनुहोला । कहिँ महत्वपूर्ण योजना बन्न सक्छ । कसैसँगको वादविवाद बाट टाढा रहनुहोला ।